''သုံးရောင်ခြယ်'' ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များ၏ အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ရှေ့ဆောင် ရုပ်ရှင်ရုံတွ - Yangon Media Group
”သုံးရောင်ခြယ်” ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များ၏ အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ရှေ့ဆောင် ရုပ်ရှင်ရုံတွ
”သုံးရောင်ခြယ်”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့်အနုပညာရှင်အချို့ ပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီး လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း၊ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းများကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်က ရှေ့ဆောင်ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပရိသတ်များအား လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်းနှင့် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပေးခြင်းများကို ယင်းဇာတ်ကားတွင်ပါဝင်သည့် သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူ၊ အိချောပိုနှင့် ရွှေသမီးတို့မှ ပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ သရုပ်ဆောင်ရွှေသမီးက ”ပရိသတ်တွေနဲ့ အခုလိုရင်းရင်း နှီးနှီးတွေ့ရတာအရမ်းကိုပျော်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားကိုလည်း လာရောက် ကြည့်ရှုအားပေးပါ”ဟု ပြောသည်။
ယင်းဇာတ်ကားကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်မှ စတင်ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာစတီးလ်(ဒွေးမေတ္တာ)မှ ရိုက်ကူးပုံဖော်ကာ သရုပ် ဆောင်များအဖြစ် ခန့်စည်သူ၊ မင်းမော်ကွန်း၊ အိချောပို၊ ရွှေသမီးတို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းမှာအဆင်မပြေမှုများကြောင့် မိန်းကလေးများ ပြည့်တန်ဆာဘဝသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ ကြရပုံနှင့် ဖခင်တစ်ဦး၏မေတ္တာတို့ကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
မယ်မြေကမ္ဘာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး မန္တလေးမြို့ ကိုယ်စားပြု အလှမယ်များ သဘာဝပတ်ဝန်းက??
'ကြီးလေးကြီး' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ယခုလ ၁၉ ရက်တွင် ရုံတင်ပြမည်
ဗင်နီဇွဲလားတွင် နိုင်ငံရေး တင်းမာမှုများကြောင့် အရေးပေါ်အကူအညီ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါးများ
သားသမီးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည့် ဆလီနာဂိုမက်ဇ်
ကိုးကီလိုအထိ ဝိတ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂီလီရန်ချန်
မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်းတွင် ဂက်စ်အိုးများ တင်လာသော ယာဉ်တစ်စီး အရှိန် မထိန်းနိုင်ဘဲ တိမ်း
ကာကွယ်ရေး ဘတ်ဂျက်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၇ဝဝ အမေရိကန် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ခွင့် ပြု
(၁၆) ကြိမ်မြောက် ငွေကျပ် ၅ဝဝ တန် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲ ငွေကျပ် သိန်းတစ်ရာနှင့်အထက် ထီဆုေ?
ဝါရှင်တန်မြို့တော်တွင် မိုးကြီးမှုကြောင့် အိမ်ဖြူတော် မြေအောက်ထပ်သို့ ရေဝင်ရောက်ခဲ့